Unai Emery oo ka hadlay xaqiiqada ku aadan wararka xanta ah ee lala xiriirinayo Arsenal Philippe Coutinho – Gool FM
(London) 05 Agoosto 2019. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Unai Emery ayaa beeniyay wararka ay saxaafada la xiriirinayo Gunners laacibka reer Brazil iyo naadiga Barcelona ee Philippe Coutinho inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga ee 2019.
Barcelona ayaa kala soo saxiixatay Philippe Coutinho bishii janaayo ee 2018 kooxda Liverpool qiimo lagu qiyaasay 160 milyan oo yuuro, wuxuuna haatan ku sugan yahay garoonka Camp Nou ku dhawaad sanad iyo bar.
Laacibka dhawaan ku hogaamiyay xulkiisa qaranka Brazil tartanka Copa America 2019 ee Philippe Coutinho ayaa lagu dhaleeceeyay qaab ciyaareedkiisa xilli ciyaareedkii hore.
Coutinho ayaa lala xiriirinayay ka dhaqaaqista Blaugrana suuqan xagaaga, gaar ahaan tan iyo markii ay kooxda reer Catalonia kula soo saxiixatay Antoine Griezmann qiimo dhan 120 milyan euro.
Hadaba waxaa jiray warar saxaafadeed ku aadan in kooxda reer London ee Arsenal ay qeyb ka tahay kooxaha xiiseenaya adeega Philippe Coutinho, laakiin macalinka reer Spain ee Unai Emery ayaa wuxuu xaqiijiyay in wararkaas ay ahaayeen kuwo aan sax aheyn, isagoo xusay in ciyaaryahanka uusan ku jirin qorshaha kooxda.
Unai Emery ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta Ingiriiska wuxuu ku sheegay:
“Dabcan, waxaan isku dayeynaa inaan la soo saxiixano ciyaartoy wanaagsan si aan kooxda u horumarino”.
“Philippe Coutinho waa ciyaaryahan aad u fiican, laakiin xaqiiqdii weligeen kama hadlin isaga”.
Muxuu ka yiri tababare Valverde, kaddib guushii ay Barcelona ka gaartay kooxda Arsenal?